निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टर नै चकित परे ! - Onlinenews Global
निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टर नै चकित परे !
June 23, 2021 laxmiLeaveaComment on निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टर नै चकित परे !
निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टर नै चकित परे ! कलाकार निशा घिमिरेको उपचारका लागि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई वर्ष अघि कलाकारिता अध्ययन गर्न भारतको देहरादुन जानुभएका उहाँ सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो ।
उहाँलाई अहिले देश तथा विदेशसमेतबाट सहयोग जुटिरहेको छ । उपचारमा थप सहयोगका लागि नवजीवनका अध्यक्ष दाहाल, चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन निरौला र निशाका बुवा प्रेम प्रसादका नाममा कृषि विकास बैंकमा खाता समेत खोलिएको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
गाउँमा जेनेरेटर सहयोगपछि मोबाइल चार्ज गर्नेको भिड!